IPoco F2 Pro: Iscreen esingakumbi, ukusebenza ngakumbi kunye nexabiso elingaphezulu | Iindaba zeGajethi
IPoco F2 Pro: Iscreen esingakumbi, ukusebenza ngakumbi kunye nexabiso elingaphezulu
Inkxaso-mali kaXiaomi ebizwa ngokuba yiPocophone kwiminyaka emibini edlulileyo yafika kwimakethi yaseSpain kunye nePoco F1 yayo, isiphelo sendlela esisebenzisa ukusetyenziswa kwezinto "ezingezizo kangako" kwisisu sayo, ukubheja kwizindlu ezinamandla ngaphakathi ezazingekho kumgangatho wakhe nabani na. Esi sixhobo size nexabiso lesibonelelo semali esikhawuleze sabekwa phezulu phezulu.
Ngoku i-POCO iveza iPoco F2 Pro isixhobo esikhule kwiinkcukacha nakwisikrini ngendlela eye yonyusa ixabiso. Masiqwalasele amanqaku ayo kunye neendaba ukubona ukuba kufanelekile na ukuhlawula i-549 ye- € ngesixhobo.
1 Uyilo kunye nomboniso
2 Isixhobo esisebenza ngokutshatisa
3 Ibhetri enkulu kunye nokunxibelelana ngakumbi
4 Iimvakalelo ezine ngasemva
5 Ixabiso kunye nokwaziswa kwePOCO F2 Pro
Uyilo kunye nomboniso
IPoco F2 Pro izuza njengelifa lomzimba weXiaomi K30 Pro, isiphelo sendlela esibuyise umva egoso emacaleni ukuyenza isebenze ngakumbi ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla, isiqithi selensi ejikelezayo apho sineenzwa ezine kunye nescreen esigcweleyo Izakhelo ezincitshisiweyo ngaphambili, asinotshi okanye amabala, kuba oku bakhetha ikhamera yangaphambili enokuhanjiswa, ngokwenkampani injongo yoku kukubonelela ngamava apheleleyo nangokuntywiliselwa ngokwemidlalo yevidiyo.
Ukukhanya kwe-1200 nit
Ukusetyenziswa komphambili wama-92,7%
Esi sikrini sifuna ukuba ngumdlali ophambili, elinye lawona manyathelo afanelekileyo kwimodeli yangaphambili. Sinepaneli ye 6,67 intshi yenziwe yi-Samsung ngetekhnoloji ye-AMOLED E3 enikezela umlinganiso okwahlukileyo kwezigidi ezintlanu okanye hayi kunye ne-TUV Rheinland eqinisekisiweyo. Nangona kunjalo, sinenqanaba le I-180Hz inzwa yokuthinta ukuvuselela, enye yokungabikho kwesi sikrini okungagqithanga kwi-60Hz ngokwemiqathango yokuhlaziya umxholo onokubonwa. Isisombululo sesikrini yi-FullHD + ngokuhambelana kwembonakalo epheleleyo HDR10 + kunye nokuphuculwa kwemeko yokusingqongileyo.
Isixhobo esisebenza ngokutshatisa
I-POCO ayifuni ukukhwela kwizixhobo zekhompyutha, into ethe yanika ngokuqinileyo udumo olunalo. Ke ngoko sifumana iinguqulelo ezimbini, zombini ezi ntaba zinamandla kakhulu iQualcomm Snapdragon 865, nangona kunjalo, sifumana iinguqulelo ezimbini ze-RAM ezineetekhnoloji ezahlukeneyo, eya kuba kuphela kwendlela yomsebenzisi. Kukwenzeka okufanayo ngokugcina ukuya kuthi ga kwi-256GB ubuninzi ngetekhnoloji ye-UFS 3.1 kwisantya esiphezulu esikhoyo kwintengiso yolu hlobo lwezixhobo zefowuni eziphathwayo.
Inguqulelo ye 8GB I-RAM kunye netekhnoloji ye-LPDDR5
Inguqulelo ye 6GB I-RAM kunye netekhnoloji ye-LPDDR4
Zonke iinguqulelo ezikhoyo ziya kubandakanya uqhagamshelo lwe5G, "isiliphu" sokuqala esivela kwimbono yam ngesi sixhobo esinokuthi sigcine ukufakwa kwale teknoloji iseluhlaza kwaye ngokuqinisekileyo ngencede ukunciphisa ixabiso lesixhobo. Ngaphandle kwamathandabuzo, kubandakanya i-5G ayingombuzo wamandla kwaye kunzima ukuqonda intshukumo. Into esinayo yile WiFi 6 eqinisekisa ukuhanjiswa kwedatha ngokufanelekileyo ukusuka kwinto esikhe sakwazi ukuyilinga kwezinye izixhobo esele zinale teknoloji kunye nohlalutyo esele silupapashile ngaphambili.
Ibhetri enkulu kunye nokunxibelelana ngakumbi
Ibhetri yinto exhalabisa ngokukodwa xa sinezixhobo zamandla aqinisekisiweyo. I-POCO iqinisekisa ukuba isixhobo sakho siya kufikelela kwiintsuku ezimbini zokusebenzisa kwaye oku basebenzise ibhetri eyi-4.700mAh. Ibango libonakala linobugorha, ngokuqinisekileyo liza kusiqinisekisa ukuba sifike ekupheleni kosuku sinomthwalo olungileyo, kodwa hayi ukuba sichithe olunye usuku ngokupheleleyo. Siza kubiza ngokukhawuleza kwe-33W Ingasetyenziselwa kwitshaja kunye nezixhobo ezinikezelwa kwiphakheji, into emele igcinwe engqondweni.
Asinophawu lokutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-Qi, ubuncinci ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Kwinxalenye yayo siyifumana NFC ukwenza iintlawulo okanye izinto eziluncedo esiqikelela ukuba sizinike eli nqaku kwaye I-Bluetooth 5.1. Ngokubhekisele kwisoftware, iqala nge-Android 10 phantsi komaleko wokwenza ngokwezifiso i-POCO 2.0, ehambelana kakhulu ne-MIUI nangona iphawula umahluko omncinci. Sinokungabikho kokutshaja ngaphandle kwamacingo, okusuka kwimbono yam kunomdla ngakumbi kunenyani yezindlu ze-chip ezihambelana nokunxibelelana kwe-5G, ngakumbi kuba phantse wonke umntu unokufikelela kwitshaja yeQi, nangona kunjalo uninzi lwabasebenzisi aluyi kuba nakho Yonwabela ukunxibelelana kwe5G kwixesha eliphakathi kwiimeko zokwenyani. Kwezokhuseleko sinayo umfundi weminwe phantsi kwesikrini.
Iimvakalelo ezine ngasemva
Sinee-sensors ezine ngasemva nazo ezinento yokwenza neXiaomi K30 Pro Ikhamera ephambili ye-64MP ene-f / 1.89m yokuvula, iya kukhatshwa ngu Iilensi zesekondari ye-13MP ebanzi yeAngle enikezela ngeedigri ezili-123 zesilinganiseloze ilensi yesithathu sine-2MP kwaye umsebenzi wayo kuphela kukuqokelela idatha yemowudi yemizobo kwaye ekugqibeleni ilensi yesine yi-5MP kwaye yenzelwe imo yeMacro kumgama nje omncinci nakwizinto ezincinci.
Ngokumalunga nokurekhodwa kwevidiyo, inika 8K ukuya kuthi ga kwi-30FPS kunye ne-4K ukuya kuthi ga kwi-60FPS Idityaniswe ne-digital stabilizer, akukho nto ivela kwi-OIS eya kuthi ngokuqinisekileyo yohlwaye ividiyo. Ngokubhekisele kwikhamera yangaphambili sineenkqubo ezingama-20MP ezinokurhoxiswa oko kuyakwanela kwiiselfies eziqhelekileyo esihlala sabelana ngazo kwinethiwekhi yoluntu okanye nayiphi na enye indlela. Le nkqubo irhoxiswayo iyasivumela ukuba sisebenzise ngakumbi iscreen kwaye nangona isinciphisa ngokubonakalayo inkqubo yokwamkelwa kobuso, ibonakala iyimpumelelo kuyilo.
Ixabiso kunye nokwaziswa kwePOCO F2 Pro
Kude kube ngoMeyi olandelayo we-25 asizukukwazi ukufumana iiyunithi zePOCO F2 Pro, Into onokuyenza ukuyigcina nakweyiphi na imibala yayo emine: Luhlaza, mhlophe, mfusa kunye grey. Esi sixhobo sifumene isaphulelo esikhethekileyo se- € 50 sokumiliselwa, nangona kunjalo, la ngamaxabiso asemthethweni kwabo bangenayo iyunithi egciniweyo:
IPOCO F2 Pro ene6GB ye-RAM + 128 yokugcina: Ukusuka kwi-549 euro
IPOCO F2 Pro ene8GB ye-RAM + 256 yokugcina: Ukusuka kwi-649 euro
Umahluko phakathi kwemodeli enye kunye nekhulu lee-euro, uthatha isigqibo sokuba yeyiphi na ehlawulayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IPoco F2 Pro: Iscreen esingakumbi, ukusebenza ngakumbi kunye nexabiso elingaphezulu
Uvavanyo lwe-Xiaomi Mi Body Scale 2 uhlalutyo lwesikali